Soo-saareyaasha Soosaarayaasha PCB-ga Raadiyaha | Shiinaha Raadiyaha Joogtada ah ee Raadiyaha Shiinaha & Shirkado
Kani waa 10 lakab oo guddi wareeg ah oo loogu talagalay warshadaha isgaarsiinta. RF PCB waxay caadiyan ubaahantahay laminates leh takhasus gaar ah oo koronto, kuleyl, makaanik ah, ama astaamo kale oo waxqabad leh kana badnaata kuwa caadiga u ah qalabka FR-4. Sanado badan oo aan khibrad u leenahay laminate microwave-based PTFE, waxaan fahamsanahay kalsoonida sare iyo shuruudaha dulqaadka adag ee codsiyada badankood.
RF PCB substrate dhoobada + FR4 substrate
Kani waa 6 lakab oo guddi wareeg ah oo loogu talagalay warshadaha isgaarsiinta. RF PCB waxay caadiyan ubaahantahay laminates leh takhasus gaar ah oo koronto, kuleyl, makaanik ah, ama astaamo kale oo waxqabad leh kana badnaata kuwa caadiga u ah qalabka FR-4. Sanado badan oo aan khibrad u leenahay laminate microwave-based PTFE, waxaan fahamsanahay kalsoonida sare iyo shuruudaha dulqaadka adag ee codsiyada badankood.
Kani waa 2 lakab guddi wareeg ah oo loogu talagalay warshadaha isgaarsiinta. RF PCB waxay caadiyan ubaahantahay laminates leh takhasus gaar ah oo koronto, kuleyl, makaanik ah, ama astaamo kale oo waxqabad leh kana badnaata kuwa caadiga u ah qalabka FR-4. Sanado badan oo aan khibrad u leenahay laminate microwave-based PTFE, waxaan fahamsanahay kalsoonida sare iyo shuruudaha dulqaadka adag ee codsiyada badankood.